Uthando lwangempela alwesabi ukuthatha izibopho nezithembiso. Umphakathi wethu ekugcineni ubuyela ezimisweni zokuqala - futhi abantu bafuna ukushada futhi. Vumela lokhu kube njalo inkokhelo yemfashini, kodwa ngokusebenzisa imfashini, umshado esontweni uba ngumkhuba wokuphila. Futhi hhayi kuphela imibhangqwana emisha: kaningi kaningi esontweni kunezinhlangothi ezimbili zabantu abadala futhi bacela ukushada nabo. Kuhlale kuthintana kakhulu futhi kuhle. Nakuba umshado esontweni uhlale uhle.
Njengoba wazi, emva kokubhapathizwa, ngamunye unenengelosi. Kukhona inkolelo enhle ukuthi emva kokushada komshado kunikezwa enye ingelosi evikela umndeni. Kunezimo eziningi lapho, emva komshado esontweni, amadoda ayeke ukuphuza futhi abashadile bayeka ukuxabana kaningi. Emshadweni, abantu abakholwayo banzima kakhulu kunokubhalisa umshado ehhovisi lokubhalisa, ngoba umshado wesonto uthatha umthwalo omkhulu hhayi wezinto ezibonakalayo, kodwa wecebo elingokomoya.
Phakathi kwemibuzo obaba abavame ukubuza umbuzo wokuthi kungenzeka yini ukuba nomshado ngaphambi komshado ehhovisi lokubhalisa. Umshado onjalo uvunyelwe kuphela ezimweni ezihlukile, ngokuvamile ezindaweni ezincane zasemaphandleni lapho umpristi eyazi khona umakoti nomkhwenyana ozoba khona iminyaka eminingi futhi uyaqiniseka ukuthi bayothatha ngokungathí sina izibopho zomshado wesonto. Iningi labapristi benqabe umqhele ngaphambi kokubhaliswa, ngoba isonto lihlukanisiwe nombuso futhi umshado wesonto awunawo umthetho wezomthetho. Ngakho-ke, owesifazane osetshenzisweni lomshado "ongeyena kuphela" akavikelwe ngumthetho, izithakazelo zakhe zomzimba zinjengobuhle njengobumbano obhalisiwe. Ngakho-ke, uma insizwa yakho iphakamisa ukuthola umpristi obeka umqhele ngaphandle kokubhalisa, kungcono ukugijima kumkhwenyana onjengoba umlilo, ngoba empeleni ufuna ukukhohliswa. Maye, ngenkathi umshado esontweni ungalingani nomshado, waphetha ehhovisi lokubhalisa, udinga ukucophelela.
Emshadweni, yena futhi akahlanganisi nje ngokusemthethweni, lokhu akuyona nje imvume yokuphila ngokobulili. Hlangani imizimba kuphela, kodwa futhi nemiphefumulo yabantu abanothando. Umshado esontweni udala uxhumano oluqinile ngokomoya, ngenxa yalokho omunye oshade naye angase ahlasele izenzo zakhe nokholo ukuze athethelele izono zomlingani wesibili.
Okushiwo umshado ukuxhuma abantu abathandekayo futhi ubasize ukuba baqonde kangcono umthwalo wemfanelo yabo, ukufakazela kubantu babo noNkulunkulu uthando lwabo oluqotho nokungenabugovu. Uthando yisipho esivela ezulwini nesimangaliso, lapho edlula esigabeni sokuthandana futhi wavuthwa. Akudingekile ukusheshisa ngesiphetho somshado , ososayensi bathi kubalulekile ukwazi omunye nomunye okungenani ngonyaka ngaphambi kokwenza isinqumo esibalulekile. Ngokungangabazeki, abukho ubuhlobo obuseduze. Bludnikov (okungukuthi, labo abangena ebuhlotsheni obuseduze ngaphambi komshado) obaba abangcwele ngokuvamile bancoma ukuthi bahlukane. Esikhathini sethu, emva kokuphenduka okuqotho kokubili, umshado wesonto unokwenzeka, kepha lokhu njalo luhambo olunzima kakhulu. Isono sidabukisa umphefumulo futhi sibhubhise uthando oluqine kakhulu.
Ngokuvamile ubuzwa: kuzokwenzekani uma singavumelani ngokocansi noma, futhi sifunda ngakho ngemva komshado? Eqinisweni, abalingani abangenakuvumelana nabo abakho, noma yiziphi izinkinga ezingaxazululwa uma abantu bebathandekayo komunye nomunye. Futhi "ukuhlola" kuvusa abantu ukuthi bazame nabalingani abasha, bezama ukujula nokujula esonweni. Futhi-ke ukukhipha isisu kwenzeka, izifo ze-venereal zitholakale futhi kungenasizathu sokuphelelwa ithemba nokuphelelwa ithemba. Umuntu owonayo uyingozi kakhulu emademoni, ngakho-ke usizi luba khona empilweni yakhe.
Umshado esontweni usivumela ukuba singcwelise izibopho zethu futhi sivikele uthando lwethu ezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zamademoni. Amakholwa abashadile abashadile abesabi ukwesaba amawilo kanye "babok" ngezinhlamvu zabo zothando.
Vikela uthando lwakho - hamba kumpristi esontweni eliseduze ngenkulumo mayelana nomshado. Umshado esontweni uzoguqula ubuhlobo bakho ngcono futhi kukusize uzwe sengathi uwonke.
"Catherine Hall, Krasnodar: konke kungenzeka!
Periwinkle: zokutshala nokunakekela musa okungadala ubunzima
Recipe iklabishi ukupheka zakudala "lazy" Analogue
Salad ne-squid amakhowe nezinye isaladi zokupheka